Uyibukela njani iFC Barcelona kunye neReal Madrid CF preseason yasimahla | Iindaba zeGajethi
Uyibukela njani yonke i-FC Barcelona kunye neReal Madrid CF preseason yasimahla
I-preseason yebhola ekhatywayo ilapha, Kwaye amaxesha amaninzi iingxaki ziqala ukuvela malunga nokuba siyibukele phi le midlalo yebhola apho amaqela wethu owathandayo aqala khona ukufumana Le midlalo iyonwabisa ngenxa yokunqongophala kokungakhathali kwaye amaxesha amaninzi inokubonelelwa simahla, njengoko kunjalo kule meko.
Sichaza ukuba ungayibukela njani imidlalo yeFC Barcelona kunye neReal Madrid CF yasimahla kule preseason ye-2019-2020 sele iza kuqala. Le preseason enkulu izakushiya umdlalo onomdla njenge-Atlético de Madrid-Real Madrid kunye ne-FC Barcelona-Chelsea FC, uza kuyiphosa? Hayi ukuba uqhubeka usazisa.
1 Uyibukela njani i-Real Madrid CF preseason yasimahla
2 Uyibukela njani i-FC Barcelona preseason yasimahla
3 Uyibukela njani i-Atlético de Madrid preseason yasimahla
4 Kuphi ukubukela ibhola ngexesha le-2019 - 2020
Uyibukela njani i-Real Madrid CF preseason yasimahla
Siqale ngeqela phantsi komyalelo kaZinedine Zidane «Zizou», abamhlophe baqala isizini ngemidlalo emikhulu efana neFC Bayern Munich - iReal Madrid CF akukho nto ingako kwaye akukho nto incinci, kwaye naphi na apho uvela khona, ukuba ungumthandi wezemidlalo uRey Ngokuqinisekileyo awufuni kuyiphosa, akunjalo? Kungenxa yoko le nto into yokuqala siza kukubonisa yona Ishedyuli yangaphambi kwexesha leReal Madrid CF Kuya kufuneka ujongane nezi nyanga zikaJulayi nango-Agasti.
I-Real Madrid-iBayern Munich ngeCawa Nge-21 kaJulayi ngo-02: 00 kwiReal Madrid TV
I-Real Madrid -Arsenal ngoLwesithathu Nge-24 kaJulayi ngo-01: 00 kwiReal Madrid TV
I-Real Madrid -Atlético de Madrid ngoMgqibelo NgoJulayi 27 nge-01: 30 kwiReal Madrid TV
I-Real Madrid-iTottenham ngoLwesibini Nge-30 kaJulayi ngo-18: 00 kwiReal Madrid TV
I-Real Madrid -Ukugqibela okanye owokugqibela kumdlalo wokugqibela weNdebe yeAudi kwi NgoJulayi 31 ngo-18: 00 ntambama okanye ngo-20: 30 ntambama kwi-Real Madrid TV
Ukuba ungumlandeli weklabhu emhlophe Uya kuba ulinde umhla weSantiago Bernabéu Trophy Ukuba iqela lisebenzisa indlela yokubonisa esemthethweni kwibala lalo ngokuchasene nabadlali abakumgangatho ophezulu ukuze bagqibe ukulungiselela ixesha laphambi kwexesha, nangona kunjalo, kulo nyaka imisebenzi eyenziwayo eSantiago Bernabéu Stadium kwikomkhulu laseSpain imisiwe ngaphandle komhla omiselweyo impikiswano yetonamenti. Ukubukela le midlalo uya kuba nakho ukuqhubeka usebenzisa ijelo elisemthethweni, I-Real Madrid TV iya kusasaza yonke imidlalo bukhoma KWI-LINK.
Uyibukela njani i-FC Barcelona preseason yasimahla
Intshatsheli yangoku yeLa Liga ikwi-swing epheleleyo ye-preseason, Siza kufumana izimbangi ezibengezelayo ezifana ne-Chelsea FC kunye nokudibana kwakhona phakathi kuka-Andrés Iniesta kunye neqela lakhe apho woyise yonke into, kuba i-FC Barcelona izakujongana no-Inesta's Vissel Kobe eJapan. Ngoku into yokuqala ofuna ukuyazi ngokuqinisekileyo yile ikhalenda ye-preseason ye-2019-2020 ye-FC Barcelona, ​​siyishiya apha ngezantsi:
I-Barcelona-Chelsea ngoLwesibini Julayi 23 nge-12: 30 emva kwemini.
I-Barcelona-iVissel Kobe ngoMgqibelo Julayi 27 ngentsimbi ye-11: 00s
I-Barcelona-iArsenal ngeCawa Agasti 4 ngo-20: 00 ebusuku.
Naples-Barcelona ngeLwesine Agasti 8 ngo-01: 36 ebusuku.
I-Barcelona-Naples ngoMgqibelo Agasti 10 ngo-23: 06 ebusuku.
Njengoko uza kuqaphela, i-preseason yeqela le-culé nayo ixakekile, iya kuba nemidlalo yazo zonke iintlobo kodwa ukuphuma kuzakubalasela apho u-Antoine Griezmann kunye nabanye abasayinayo beqela laseValverde baya kwamkelwa. Iya kuba nge-4 ka-Agasti nge-20: 00 pm eCamp Nou e-Barcelona. E-Spain ungayilandela yonke imidlalo ye preseason ye I-FC Barcelona ngeRakuten Sports kunye ne-ESPN kwihlabathi liphela (LE LINK). Imidlalo yeRakuten iya kukuvumela ukuba ufikelele kwimidlalo simahla.
Uyibukela njani i-Atlético de Madrid preseason yasimahla
Yonke i "Cholo" Simeone nayo iyazilungiselela le 2019-2020 preseason ukuze ikwazi ukukhetha yonke into, kwaye iqela lifake abadlali abaphambili njengoJoao Felix ukulinganisa kulo lonke ukhuphiswano njengoko bekusenzeka kude kube ngoku. Iseti yomatrasi inokunikezela okuninzi ngamandla kunye neenzipho, ngakumbi kwindawo yokunethezeka eyiWanda Metropolitano, elinye lawona mabala emidlalo anamhlanje kunye nemibala eYurophu. Siqala njengangaphambili ngekhalenda yangaphambi kwexesha le-Atlético de Madrid yonyaka we-2019:
Atlético de Madrid - Numancia kwi NgoMgqibelo umhla wama-20 kuJulayi 20 ngo-19: 00 ebusuku.
Atlético de Madrid - Chivas de Guadalajara kwi NgoLwesithathu, nge-24 kaJulayi ngo-03: 00
I-Atlético de Madrid - iReal Madrid iyaqhubeka NgoMgqibelo, ngoJulayi 27 ngo-01: 30 ekuseni
I-Atlético de Madrid - MLS Zonke iiNkanyezi ziqhubeke NgoLwesine, Agasti 1 ngo-02: 00
I-Atlético de Madrid -Iatletico San Luis el NgoMgqibelo, Agasti 3 ngo-19: 00 ebusuku.
Atlético de Madrid - Juventus kwi NgoMgqibelo, Agasti 10 ngo-18: 00 ebusuku.
Ixesha langaphambi kwe-Atlético de Madrid nalo lichukumisekile Kulo nyaka uzakuhamba kakhulu kwaye ajongane neentshaba ezinkulu ezinje ngeJuventus yaseTurin kunye neReal Madrid, phakathi kwabanye. Ekuqaleni kuka-Agasti i-lobuntshatsheli yasekhaya kunye neLa Liga iqala, apho iqela laseCholo liza kulwela ukuphumelela isihloko ngaphandle kwamathandabuzo. Ukubona le midlalo yeAtlético de Madrid, iya kusasazwa simahla kwisiteshi I-GOL ebonwa kwi-DTT, Movistar + kwaye kunjalo nakwi-intanethi (LE LINK).
Kuphi ukubukela ibhola ngexesha le-2019 - 2020
Ithelevishini ebonelela ngokubukela ibhola iyakhula Kwitumente yaseburhulumenteni yexesha le-2019-2020, sineendaba ezinje ngeqela leMediaset, nanga amathuba:
MiTele Plus: Nge- € 35 ungabukela iLaLiga Santander, iLaLiga 123, iChampions League kunye ne-Europa League ngeqonga layo elikwi-intanethi.
Ukudibanisa iMovistar: Iya kubonelela ngeephakeji zayo ukusuka kwi-85 euro ngenyanga ngoKhetho lweFusion apho siya kuba neLaLiga Santander, iLaLiga 123, iMovistar Partidazo, kunye nee-euro ezingama-20 ngaphezulu ngenyanga uya kongeza iMovistar Champions League kunye neChampions League. Ke ngoko, i-euro ezingama-105 lolona khetho lubiza ixabiso eliphantsi kwiMovistar +, ngaphandle kokuba ufuna ukubukela iPremier League kunye neBundesliga xa iyakufika kwi-140 euros ngenyanga.
Injongo: Iya kubonelela ngomdlalo ovulekileyo wosuku ngalunye lwamaqela angadlaliyo kwimidlalo yaseYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Uyibukela njani yonke i-FC Barcelona kunye neReal Madrid CF preseason yasimahla
ILogitech Craft, ikhibhodi efanelekileyo yokusebenzisana nayo? Siyayijonga